थापाथलीमा प्याज किन्नेको लाइन – Metro Today Weekly
थापाथलीमा प्याज किन्नेको लाइन
प्रकाशित : १२ आश्विन २०७७, सोमबार १५:१७
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो थापाथली विक्री कक्षबाट प्याज बेच्न थालेपछि किन्नेको लाइन लागेको छ । खाद्यको विक्री कक्षबाट प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा प्याज सर्वसाधारणलाई विक्रीवितरण गर्न सुरू गरेको छ।
खाद्यले गत शुक्रबारदेखि प्याज बेच्न सुरू गरेको हो। प्याज किन्नको लागि बिहान साढे १० बजेदेखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म समय तोकिएको छ। एक जनाले तीन किलोसम्म किन्न पाउने खाद्यले जनाएको छ। प्याज किन्नको लागि सर्वसाधारणको लाइन लागेको छ।
सरकारले बजार अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिई विक्री गर्न लागेका प्याजलाई जफत गरी सर्वसाधारणलाई सो कक्षबाट प्याज विक्री गर्न थालेको हो। यसअघि बजार अनुगमनका क्रममा १४ हजार ६०० केजी प्याज सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
एमालेमा पुनः एकताको पहल १२ आश्विन २०७७, सोमबार १५:१७
पत्रकार महासंघको अध्यक्ष अझै आचार्य १२ आश्विन २०७७, सोमबार १५:१७
सञ्चारमा माओवादी एजेण्डा घुसाउन को सक्रिय ? १२ आश्विन २०७७, सोमबार १५:१७
पत्रकार महासंघकी माओवादी केन्द्र ? खोप र राहत सहयोग समेत चलखेल १२ आश्विन २०७७, सोमबार १५:१७
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, को थपिएलान् सात मन्त्री ? १२ आश्विन २०७७, सोमबार १५:१७